‘आईजीपी साब’ बाँके एसपीले किन गरेनन नन्नकुनी घटनाको जाहेरी दर्ता ? – esetokhari.com
‘आईजीपी साब’ बाँके एसपीले किन गरेनन नन्नकुनी घटनाको जाहेरी दर्ता ?
एसपी अधिकारी र पीडकबिच आर्थिक तथा राजनीतिक चलखेल भएको खुलासा, एसपीको व्यवहारले नागरिकदेखि प्रहरी नै आजित
२०७८ श्रावण ३२, सोमबार १४:५५
नेपालगन्ज : मुलुकी फौँजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा प्रहरीले मुद्धा दर्ता गर्दिन भन्न पाउँने व्यवस्था गरेको छैन । कुनैपनि जाहेरी दर्ता गर्ने नगर्ने प्रहरीको तजबिजी अधिकार नभएको बाँकेका कानून व्यवसायी बताउँछन ।‘
पीडितले दिएको जाहेरी प्रहरीले सम्मानपूर्वक दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको हो । फैसला दिने काम अदालतको हो । प्रहरीको वा एसपीको होइन । प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेमा अन्य निकायबाट पनि जाहेरी दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
बाँकको जानकी गाउँपालिका–२ बेलभार अन्तर्गतको नेवाजी गाउँकी ३८ वर्षीया नन्कुनी धोबीको हत्या जाहेरी बाँकेका एसपीले दर्ता नगर्नुलाई देशभरका अधिकारकर्मी सन्चारकर्मी र कानून व्यवसायीले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन ।
बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीसँगको टकरावले पीडित सर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेको नागरिक गुनासो छ ।
एसपी अधिकारीले जिम्मेवारीबाट पन्छिदै राजनीतिक आड र पहुँच तथा पीडक पक्षसँगको आर्थिक चलखेलमा जाहेरी दर्ता नगरेको महिला अधिकार मन्चले खुलासा गरेको छ ।
एसपी अधिकारीले गैरजिम्मेवारी पूर्वक ‘हत्याको जाहेरी बाँके प्रहरीमा वा आफुमार्फत कुनै हालतमा दर्ता नहुने बताएको मानवअधिकारकर्मी रूवी खान बताउँछिन । उनले भनिन ‘यसबाट पनि एसपी अधिकारी र पीडक पक्षको चलखेल भैरहेको पुष्टि हुन्छ ।’
बाँकेका एसपी अधिकारी बाँकेका एक पुर्व साँसदको आडमा दादागिरी मचाउदै आएको पत्रकार र अधिकारकर्मीलाई समेत नानाथरी गालीगलौज गरी धम्की दिने गरेको हत्या जस्तो घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न कन्जुसाई गर्दै आएको महिला अधिकार मन्चद्धारा जारी विज्ञप्तीमा यस अघि नै उल्लेख गरिएको छ ।
बाँके सरूवा भएर आएको डेढ महिनामै एसपी अधिकारी दर्जनौं घटनामा विवादीत बनिसकेका छन । शुरूमै पत्रकारमाथि जाई लागेका उनी अधिकारकर्मीदेखि नागरिकलाई समेत सास्ती दिदै आएका छन ।
उनी आएदेखि बाँकेका कुनैपनि पीडितले सहज र प्रभावकारी तथा प्रहरीको उद्देश्यमा रहेर सेवा पाउन सकेका छैनन । उनको व्यवहारदेखि पत्रकार, नागरिक समाज अधिकारकर्मी सर्वसाधारण मात्रै होइन उनी मातहतकै प्रहरी आर्जित भैसकेका छन ।
नन्कुनीका भाई माताप्रसाद दिदी झुण्डिएको कोठामा झुण्डिन सजिलो बनाउने कुनै चिज नराखिएको र कानबाट रगत बगेको आफूले देखेको बताउँछन् ।
यसका साथै पहिलेदेखि नन्कुनीमाथि हुँदै आएको अत्याचारका कारण उनले आत्महत्या नभई उनका श्रीमानले हत्या गरेको हुनसक्ने आशंकामा माताले ६ गते नै प्रहरीमा किटानी उजुरी दिएका हुन । तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अहिले पनि नमानेको अधिकारकर्मि खान बताउँछिन ।
बाँकेका एसपी अधिकारीलाई उक्त घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न २५ जिल्लाका महिला अधिकार मन्च आबद्ध अधिकारकर्मी लगायतका दबाब आएको छ । तर, एसपी अधिकारी राजनीतिक र आर्थिक प्रलोभनमा परेको कराण सो जाहेरी दर्तामा चासो नदेखाएको अधिकारकर्मी खान बताउँछिन ।
आगामी १० गतेदेखि न्यायका लागि बाँके सहित देशभरका प्रशासनमा धर्ना दिने र बाँकेका एसपी अधिकारीको सरूवा र कारवाहीको माग समेत गर्ने तयारी भैरहेको महिला अधिकार मन्च बाँकेले बताएको छ ।
नन्कुनीका पिता छोट्टन धोवीले प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन । उनका अनुसार आफूले मुचुल्का गर्दा नै छोरीको हत्या भएको भन्दै सहीछाप गर्न नमानेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थुनिदिन्छु भन्दै जबरजस्ती सहीछाप गराएको थियो ।
छोट्टनले बाँकेका एसपी अधिकारी र आरोपित पीडक पक्षबिच अनुचित साँठगाँठ भएको खुलासा गरेका छन ।
यतिबेला बाँकेबासीले बाँके प्रहरीलाई होइन प्रहरी प्रमुख आईजीपी शैलेन्द्र थापा क्षेत्रलाई सोध्न थालेका छन ‘आईजीपी साब बाँकेका एसपीले किन गर्दैनन उजुरी दर्ता ?’ यसको जबाफ अब बाँके प्रहरीले होइन आइजीपी वा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।